David contre Goliath na Prepear contre Apple pour son logo | Famoronana an-tserasera
Toa fihomehezana izany, fa izany no tsy maintsy eritreretin'ny maro rehefa fantatr'izy ireo fa nanomboka ny fitsarana i Apple manohitra orinasa kely. Mampihomehy satria ny sary famantarana an'ity zazavavy kely ity dia voahangy tsotra, na bevohoka aza.
Angamba fikasan'i Apple ny Aza avela misy orinasa mampiasa voankazo ho famantarana azy ireo. Izany hoe te hihazona an'io lovia voankazo io izy araka ny fikasana nomena. Araka ny hitanao amin'ny sary lohateny, ny sary famantarana an'ity orinasa ity dia ny hoe tsy manakaiky na inona na inona izy io na misy ifandraisany amin'ny tsy maha voankazo fotsiny.
Ity orinasa kely ity dia manana fampiharana fanomanana sakafo izay maneho azy miaraka amin'ny sary famantarana mba ho fantatra amin'ny peroa misy tsipika maitso. Apple dia nilaza fa ny logo dia mitovy amin'ny sary famantarana azy.
Ry namako Instagram malala- Mila ny fanampianao aho! Fantatro fa be dia be ny zavatra mavesatra eto amin'izao tontolo izao, ary tsy misy fampitahana izany, fa mila ny fanampianao amin'ny toe-javatra iray izay misy fiantraikany amiko, amin'ny fianakaviako, ary amin'ireo mpiara-miasa amiko aho. Ampianaro azafady! Betsaka aminareo no mahalala fa nanangana orinasa antsoina hoe Prepear aho efa ho 5 taona lasa izay. Izy io dia rindrambaiko iray izay ahafahanao mitahiry ny resanao rehetra amin'ny toerana iray, mandamina ny sakafonao, manao lisitra fivarotana ary mahazo ny fivarotanao rehetra amin'ny toerana iray. Vao tsy ela akory izay tao @apple eny, ilay Apple trillion izay nanapa-kevitra ny hanohitra ary hanaraka ny marika famantarana ny orinasan-tsika kely izay milaza fa ny logo misy anay dia manakaiky ny sary famantarana azy ireo ary toa manimba ny marika amoron'izy ireo? Fijaliana lehibe ho antsika ao amin'ny Prepear io. Hiadiana amin'izany dia handany an'aliny dolara. Ny zavatra MANGALATRA dia ny nanaovan'i Apple izany tamin'ny orinasa marobe amina logo maro hafa momba ny voankazo, ary maro no nisafidy ny handao ny logo, na ny varavarana akaiky. Na dia mandeha lavitra aza ny sisa amin'izao tontolo izao hanampy ireo orinasa madinidinika mandritra ity areti-mandringana ity dia nifidy ny hanaraka ny orinasantsika kely i Apple. Tsy mitady olona hampiato ny fampiasana na ny fividianana vokatra Apple aho. Mahatsiaro ho adidy ara-moraly aho hijoro hanohitra ny hetsika ara-dalàna mahery setra ataon'ny Apple amin'ireo orinasa madinidinika ary miady amin'ny zon'ny fitazonana ny sary famantarana. Miaro tena amin'ny Apple isika fa tsy hitazona ny sary famantarana fotsiny, fa mandefa hafatra any amin'ireo orinasa teknolojia lehibe izay misy vokany ny fampijaliana ireo orinasa kely. AHOANA NO AZONAO FANAMPIANA: 1 Manasonia ny fanangonan-tsonia (rohy ao amin'ny tantaram-piainako na amin'ny tantarako) 2 Zarao amin'ny Facebook, Instagram, Twitter, sns. http://chng.it/QPd2mRYW #savethepearfromapple
Lahatsoratra iray nozarain'ny Resipeo mahasalama ny ankizy • Zatra (@superhealthykids) amin'ny Aug 7, 2020 ao amin'ny 12: 56pm PDT
Miorina amin'ny zava-misy fa ity logo ity dia afaka mamorona dilution ny toetra mampiavaka ny sary marika ananan'i Apple. Fa andao, mila mandeha lavitra isika mahita fitoviana sasany, satria na ny tsipika matevina an'ilay sary famantarana aza Amin'ity fampiharana ity dia tsy misy ifandraisany amin'ireo an'ny marika amerikana.
Ny mahaliana, ary maharikoriko, ny raharaha dia araka ny filazan'ny tompona orinasa ity, Tsy vao sambany niatrika fampiharana am-polony tamin'ny alàlan'ny logo voatondrona i Apple amin'ny voankazo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny ataon'ity orinasa ity dia rehefa manana sary famantarana voankazo iray ianao dia hahazo anao, ary raha tsy manipy vola an'aliny ianao dia tsy maintsy omenao miakatra
Raha ny marina, ity orinasa ity dia efa nanangona sonia maherin'ny 30.000 hamoahana an'i Apple ity fomba fampiasana ny heriny amin'ny orinasa kely ity. Raha mijery ireo logo roa ireo dia tsy misy olona mahatakatra ny fomba hitrangan'izany. Ny vintana rehetra eto an-tany ho an'ny tompona vehivavy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Rehefa apetrak'i Apple amin'ny sary famantarana orinasa kely iray izay voahangy ny seho
Ny fahafaha-manao asa rehetra amin'ny fianarana Fine Arts